Xaqaada 'Xaqa Aad U Leedahay Inaad Ka Dhinto COVID-19' waa in la dammaanad qaadaa
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Caafimaadka Warka » 'Xaqa aad U Leedahay Inaad Ka Dhinto COVID-19' waa in la dammaanad qaadaa
Wararka Australia • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
'Xaqa aad U Leedahay Inaad Ka Dhinto COVID-19' waa in la dammaanad qaadaa
Senator -ka Australia Pauline Hanson
Looma baahna Tallaal!
Senator -ka Australia Hanson wuxuu ku adkeysanayaa inay saxsan tahay xitaa markii loo sheegay in tallaallada jira ay dhaafeen tijaabooyinkii loo baahnaa isla markaana ay aad ugu yaraayeen caafimaadka marka la barbar dhigo qaadista fayraska.
Waali-ka-hortagga Tallaalka waxaa ka dhawaajiyay Senator Pauline Hanson
Senator Pauline Hanson ayaa ku andacoonaysa in tallaallada COVID-19 aan si habboon loo baarin.
HE Pauline Hanson waxaa lagu yaqaanaa hadalo muran badan dhaliyay oo ku saabsan barnaamijka tallaalka. Iyadu waa taageere anti vax.
Faallooyinka Hanson waxaa si kulul u dhaleeceeyay khubarada caafimaadka waxayna ku maadeysteen internetka.
Hoggaamiyaha xisbiga midigta ee xisbiga One Nation, Senator Pauline Hanson, ayaa ku dhawaaqday in ganacsigaas iyo dawladdu aysan "ku qasbin ama u cagajuglayn" dadka tallaalka iyo in dadku ay haystaan ​​ikhtiyaar ay ku diidaan tallaalka COVID-19, xitaa haddii waxay u dhintaan fayraska.
Waa amuujiyaa dhaqdhaqaaqan oo kales ayaa sidoo kale ka socda UK iyo dalal kale.
Haddii dadka fursad la siiyo, la tallaalo… iyo haddii dadku, sida aniga oo kale, oo aan qaadan tallaalka, markaa waxaan helayaa COVID-19 oo waan ka dhintaa, taasi waa dookhayga, ”Hanson ayaa sidaas yidhi.
Isagoo ku andacoonaya in tallaallada COVID-19 aan si sax ah loo tijaabin, ayuu senatorku sheegay in iyada '' aan loo cagajuglayn doonin ama loogu hanjabin doonin inay qaadato tallaal.
Hanson waxay ku adkeysaneysaa inay saxneyd xitaa markii loo sheegay in tallaallada jira ay dhaafeen tijaabooyinkii loo baahnaa isla markaana ay aad ugu yaraayeen caafimaadka marka la barbar dhigo qaadista fayraska.
Hanson waxaa lagu yaqaanaa inuu sameeyo hadalo muran dhaliya oo ku saabsan barnaamijka tallaalka ee socda. Bishii la soo dhaafay, soo-saareyaasha barnaamij caan ka ahaa raadiyaha Sydney ayaa doortay inay 'afuufaan' qaar ka mid ah hadaladeedii ka-hortagga tallaalka intii lagu jiray wareysiga lagu baahiyay dib-u-dhac 30-ilbiriqsi ah.
Faallooyinka Hanson waxaa si xun u weeraray xirfadleyda caafimaadka waxaana si weyn loogu jees jeesay internetka iyadoo faallooyinka ay sheegayaan in faafinta farriimaha ka-hortagga tallaalka Hanson uu halis gelinayo nolosha dadka kale. "Doqon halis ah," hal qof ayaa ku qoray internetka.
Tallaalku wuxuu khasab ku noqon doonaa dhammaan shaqaalaha daryeelka waayeelka ee deggan Australia laga bilaabo Sebtembar 17. Si kastaba ha ahaatee, Raiisel wasaare Scott Morrison ayaa maanta ku dhawaaqday in dowladda dalku aysan wax qorshe ah u hayn waajibaad tallaal oo ballaaran.
"Waan ognahay inay jirto dhiirigelin gudaha ku jirta tallaal," ayuu yiri PM. Waxay u badan tahay inaadan qaadin [fayraska], uma badna inaad si xun u xanuunsato oo uma badna inaad saaxiib siiso.
Illaa iyo hadda, 22.5% dadka Australiyaanka ah ee ka weyn 16 jir ayaa si buuxda loo tallaalay 44.2% ayaa qaatay ugu yaraan hal qiyaas tallaal, sida ay dawladdu sheegtay.
Oktoobar 21, 2021 at 01: 32
William R MacPheat wuxuu leeyahay,
Ogosto 10, 2021 markay tahay 18:49
Tallaalada si buuxda looma baarin! Waxay yihiin tijaabo, adeegsi degdeg ah oo kaliya. Wax tixgelin ah lama siinin tallaabooyin kale oo ka hortag ah oo aan lahayn waxyeello yar ama aan lahayn, gaar ahaan fitamiin D3. Qofna si sharci ah uma dhihi karo saameynta tallaaladu uma xuma sida saamaynta fayraska. Dhab ahaantii waxaa jira dhakhaatiir sheegaysa inay rumaysan yihiin in tallaalladu ay aakhirka dili doonaan dad ka badan fayraska. Ma hayno macluumaad muddo dheer ah oo ku saabsan tallaalada. Waxaad sheekadan ku marin habaabinaysaa dadka.